Tantara: Jezebela: Mpanjakavavy Ratsy Fanahy Iray - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Tsy vehivavy israelita akory i Jezebela. Zanakavavin’ny mpanjakan’i Sidona izy. Izy dia nanompo an’i Bala andriamani-tsy izy, ary nitarika an’i Ahaba sy ny Israelita maro be hanompo koa an’i Bala. Nankahala an’i Jehovah i Jezebela ary namono maro be tamin’ireo mpaminaniny. Ny hafa dia tsy maintsy niaﬁna tany an-johy mba tsy hahafaty azy ireo. Raha naniry zavatra iray i Jezebela, dia hamono mihitsy olona iray mba hahazoana izany.
Nanoratra taratasy àry i Jezebela ho an’ny ﬁloha sasany tao amin’ny tanàna nonenan’io lehilahy nantsoina hoe Nabota io. ‘Mitadiava olona sasany tena ratsy fanahy. Asaivo milaza izy fa niteny ratsy an’Andriamanitra sy ny mpanjaka i Nabota’, hoy izy tamin’ireo. ‘Avy eo dia raiso ho any ivelan’ny tanàna i Nabota ary torahy vato ho faty.’
Ahoana no nampisehoan’i Nabota herim-po sy tsy ﬁvadihana tamin’i Jehovah? (1 Mpanj. 21:1-3; Lev. 25:23-28)